Kawaii Potato YouTube Channel Analytics and Report - Tính toán bởi NoxInfluencer
Kawaii Potato YouTube Channel Analytics and Report
Kawaii PotatoTrang phân tích dữ liệu Youtube Xuất
Dữ liệu cập nhật ngày 2020-09-14 11:10:58Đang tính toán
1,288,968th ( Top 9.7% )
190,372nd ( Top 20.2% )
Nên suy nghĩ thêm (Top 30.25%)
807.12N (Mỗi video)
CPM 568.75N-659.75N Dự kiến tiếp xúc 1.31N
Video được xem nhiều nhất từ Kawaii Potato Kênh Youtube
HOTဒိန်းဒေါင်လုပ်ချက်ကြောင့် ခင်လှိုင် ဖင်လန်ရတယ်
2019-02-17 Ngày xuất bản
168.62N 1.26N 81 17
Video mới nhất từ Kawaii Potato Kênh Youtube
Kawaii Potato Video quảng cáo của
Kawaii Potato isasocial & mobile first entertainment media for Myanmar millennial. We bring you exclusive celebrity interviews as well as infotainment videos in food, Myanmar movies & Myanmar drama series, Myanmar music, Myanmar lifestyle & sport. Stay tuned, subscribe to our channel.
Kawaii Potato ဟာဆိုရင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် မိုဘိုင်း ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ မီဒီယာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များရဲ့ အင်တာဗျူးတွေ၊ အစားအသောက်တွေအကြောင်း၊ အားကစား၊ lifestyle နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ခြင်းဖြင့် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု အားပေးနိုင်ပါတယ်။